Nzọụkwụ 3 iji kpuchido Blog gị na Nnukwu Iwu Ọbara | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 16, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Taa bụ ụbọchị mbụ nke BlogINDIANA ma ọ dị mma. Emere m ọtụtụ n'ime na-agbarụ site na ihe omume ahụ, ọbụnakwa gbaa ọsọ ndụ nri obere oge.
Oge izizi m gara mere gbawara m, ọ bụ n'akụkụ iwu nke ịde blọgụ. Onye ọka iwu anaghị agba nnọkọ ahụ mana ọ bụ onye na-ede blọgụ, Andrew Paradies, onye lebara anya na iwu niile metụtara iwu metụtara ịde blọgụ. Isiokwu a na-akpali akpali nke na edere m n'okpuru ụkwụ m ozugbo wee tinye Disclaimer na ibe Usoro Usoro Ọrụ m.
1. Tinye Nkwuputa na Blog gị na njikọ ya na thekwụ
Ihe data na ozi niile enyere na saịtị a bụ maka naanị ebumnuche. Martech Zone emeghi nnọchite anya dịka izi ezi, izu ezu, ugbu a, kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ ndaba nke ozi ọ bụla na saịtị a & agaghị aza ajụjụ maka njehie ọ bụla, enweghị, ma ọ bụ igbu oge na ozi a ma ọ bụ ọnwụ ọ bụla, mmerụ ahụ, ma ọ bụ mmebi sitere na ngosipụta ya ma ọ bụ jiri. A na-enye ozi niile dị ka ihe ndabere.
Nkwupụta a na-eme ka ndị mmadụ mara na ozi ha chọtara na blọọgụ a ga-ewere dị ka echiche na ọ bụghị eziokwu. Agbanyeghị na ọnya ahụ doro anya, n'ụzọ iwu ọ bụghị belụsọ na i kwuo ya! Tinye disclaimer na blog gị taa. Mee ya ugbu a! Echela.
Mma inwe a disclaimer karịa n'ihe ize ndụ a $ 20 ikpe.
2. Bido Corporationlọ Ọrụ Ikike Mbelata nke Akaụntụ maka Blog gị
Ọzọkwa, etinyekwara m blog m n'okpuru ụlọ ọrụ m nwere oke ụgwọ (Llc). Idebe Blog n'okpuru Llc m, DK New Media na-etinye blọgụ m n'okpuru nche anwụ nke ụlọ ọrụ m (nke ọ bụ kemgbe m bidoro Llc - mana eleghara m anya ịde ya na ederede ụkwụ blog m).
Ikwesighi ichegbu onwe gi banyere ihe onye oru meputara dika okwu - nke ahu bu echebe n'okpuru edemede 230 nke mmezi mbụ.
3. Kwadoro Electron Frontier Foundation
M ga-agbakwunye na ihe nke atọ ị nwere ike ime iji chebe onwe gị n'ụzọ na-enweghị isi bụ ịdenye aha ma ọ bụ nye onyinye na Nchịkwa Electronic Frontier Foundation.
Nke a bụ naanị nzukọ na-achọ ma na-alụ ọgụ maka ikike na nnwere onwe nke ndị na-ede blọgụ.
Tags: blogịde blọgụikpechebe
Aug 17, 2008 na 9: 09 AM
Nke a mechara mee ka m kwenye ime ihe mbụ ahụ.
N'ime Usoro Ọrụ gị, enwere mmejọ okwu ntakịrị dị mkpirikpi. I nwekwara ike itinye ihe abụọ ọzọ:
1.) ụghalaahia nke ndị nwe ha
2.) are nweghị ọrụ maka ọdịnaya ị jikọtara ya.
jay elekọta mmadụ media
Jun 23, 2009 na 2:33 AM
Nke a na-enye aka n'ezie. Enwere m blọọgụ nke dị afọ 3 ma anaghị m etinye ọkwa ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Jul 24, 2011 na 12: 47 AM
Daalụ Douglas, m na-eme nke a ozugbo, ana m ekelekwa Martin, ibute okwu ụghalaahịa.